Puntland oo sheegtay in ay Howlgal ku dhishay 20 Shabaab ah | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Puntland oo sheegtay in ay Howlgal ku dhishay 20 Shabaab ah
Puntland oo sheegtay in ay Howlgal ku dhishay 20 Shabaab ah
Ciidamada ammaanka maamulka Puntland gaar ahaan kuwa (PSF) ayaa maalmahan hawlgallo ballaaran oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab waxa ay ka wadeen Buuraleyda degaanada Madar-shoon, Karin Xagarood, Mariidle iyo Buuraha Cal-Madow, halkaasi oo saldhigyo ay ku leeyihiin Al-shabaab.
Saraakiisha Ciidamada Maamulka Puntland ee howlgalkan horkaceysay ayaa waxa ay sheegeen intii uu howlgalkan socday in ay ku dileen Labaatan Dagaalame oo ka tirsanaa ururka Al-shabaab.
Sidoo kale saraakiisha ayaa waxa ay ka tacsiyadeeyeen geerida Laba sarkaal oo ciidanka PSF-ta kaga geeryooday Miino shalay kula kacday wadada u dhexaysa Madarshoon iyo Galgala, taasi oo ay la eegteen ururka Al-shabaab.
Hawlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ciidamada PSF-ta Puntland wadaan ayay saraakiishu sheegeen inay sii socon doonaan ilaa Al-shabaab laga soo afjarayo lagana xoraynayo Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.
Shalay ayay aheyd markii Qarax jidgal ah oo nuuciisa uu ahaa Miinada dhulka lagu aaso ayaa Gaari Cabdi Bille ah oo ay wateen Ciidamada PIS-ta Puntland lagula eegtay duleedka magalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari.
Afhayeen u hadlay ururka Al-shabaab ayaa sheegay qaraxaasi in ay ka dambeeyeen rag ka tiran Shabaab, gaar ahaan kuwa ku sugan degaanada Puntland, waxaana uu tilmaamay Qaraxaasi in ay ku dileen saraakiil iyo Ciidamo ka tirsanaa Puntland